HomeMinecraftMinecraft Girls Music Band Band
Minecraft Girls Music Band Band	Leave a comment
Ohatra iray amin'ny hira noforonina natsangana amin'ny fampiasana fianarana fiara. Ny rindrambaiko maimaimpoana dia mamorona ny mozika manokana ary Video mifototra amin'ny andraikitra fohy. Tsy ho ela malalaka eto, izay ahafahanao manandrana sy mampiasa io teknolojia io maimaim-poana sy tsy misy fetra.
Minecraft dia lalao ordinatera atao any amin'ny tontolo misokatra izay manana fahalalahana hetsika sy asa tsy voafetra. Ny lalao voasoratra ao Java ary nanjary tany 2009 soedoa developer Markus Persson, fantatra koa amin'ny hoe Notch. Miaraka amin'ny lalao orinasa miorina Mojang, fa ny lalao mbola dalam-pandrosoana, na dia ao amin'ny 2014 avy Markus Persson nividy 2,3 miliara ho an'ny Microsoft. Ny tontolo feno lalao dia misy cubes, izay maneho karazana fitaovana maro samihafa. Ny lalao dia azo tanterahina amin'ny fomba amam-panao mpilalao tsotra na multiplayer. Ao amin'ny sehatra manerantany dia afaka misafidy ianao na eo amin'ny sehatra midadasika na mamorona iray hafa.